Minecraft tsy voasakana - Ahoana no filalaovana any an-tsekoly? - Lalao
Minecraft tsy voasakana - Ahoana no filalaovana any an-tsekoly?
Minecraft dia lalao mahomby amin'ny fotoana rehetra izay manjaka na dia amin'ny andro maoderina aza. Izy io dia sary mikatona sy pixelated dia nanjary teboka fivarotana voalohany. Na dia eo amin'ny sehatry ny lalao mandroso amin'ny sary aza, dia mbola safidy ho an'ny olona maro io. Nahoana? Izany dia noho ny fahalalahana manangana ny toetranao sy izao tontolo izao. Minecraft dia azo namboarina tanteraka.
Na izany aza, satria lalao malaza io dia mety noferan'ny sekolinao ny fidirana. Angamba tsy azonao idirana amin'ny alàlan'ny wifi any am-pianarana. Ahoana no ahafahanao milalao Minecraft any an-tsekoly? Handinika safidy telo azontsika atao hilalao Minecraft any an-tsekoly izahay.
Mikasa ny hamorona ny hoditrao manokana amin'ny Minecraft? Taratasim-bola Hevitra sy torohevitra momba ny hoditra Minecraft tsara indrindra avy amin'ny lahatsoratray vao haingana.
Minecraft nosakanana: Mampiasà solo-saina amin'ny Sekolinao
Raha tsy manana fitaovana manokana na solosaina entinao any an-tsekoly ianao dia hiankina amin'ny solo-sain'ilay sekoly. Ankehitriny, misy ny olana sasany rehefa mijery ny solosainan'ny sekoly hilalaovana Minecraft ianao.
Voalohany indrindra, ny filan'ny rafitra dia azo inoana fa tsy hifanaraka, indrindra amin'ny fampisehoana sary. Noho izany dia tsy maintsy milalao Minecraft amin'ny toerana ambany indrindra ianao mba hahazoana antoka fa afaka mandeha tsara izy io ary hitondra anao traikefa lalina.
Raha mikasa ny hilalao amin'ny Internet ianao dia mety te hijery ny hafainganan'ny Internet. Indraindray misy satroka haingam-pandeha izay mety hahatonga azy ho sarotra ny milalao Minecraft amin'ny PC an-tsekoly. Na izany na tsy izany dia miankina aminao ny amin'ny fomba filalaovanao Minecraft amin'ny solosainanao.
Raha azonao ireo risika ireo sy ny fihenan'ny fampisehoana dia afaka manohy miloka loza ianao. Na izany aza, raha manana admin misaraka ny solosainanao dia mety mila misafidy rakitra hafa ianao.
Iza ny rakitra Minecraft alaina ao amin'ny PC an-tsekoly?
Misy rakitra roa azo alaina ao amin'ny PC Minecraft. Misy rakitra .msi sy .exe. Raha manana fidirana ho mpitantana ny PC ianao dia azonao atao ny mampiasa ny rakitra .msi ary apetrakao. Na izany aza, ny ankamaroan'ny sekoly dia misoroka ny fidiran'ny admin ho an'ireo mpianatra. Noho izany dia tsy maintsy sintominao ilay rakitra .exe. Aza matahotra ve ianao! Tsy hisy fiatraikany amin'ny lalao ataonao izany. Izay misy ihany ho an'ny mpampiasa tsy admin. Azonao atao ny misintona ny rakitra .exe Eto .
Azonao atao ny manaraka ny fizotran'ny fanaingoana sy ny fametrahana azy. Raha tsy tianao ny mahita ny fitantanan-draharaha fa nametraka Minecraft ianao dia azonao atao ny mitazona azy any amin'ny toeran-kafa.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny minecraft any an-tsekoly?
Ny fisintomana rakitra .exe voalaza etsy ambony dia tokony hamaha ny Minecraft amin'ny PC an'ny sekolinao. Saingy, ny tambajotra dia karazany hafa tanteraka. Sarotra ny milalao Minecraft amin'ny fomba mahomby raha tsy manana fidirana Internet amin'ny sekoly ianao. Ireto misy fomba hafa azonao ampiasaina:
1. Ampiasao ny toeranao
Saika ny PC rehetra dia mampiasa wifi ankehitriny. Na dia tsy manana fitaovana wifi aza ny solosainao any an-tsekoly dia afaka mividy azy mora foana ianao. Ny fitaovana wifi mahazatra dia mora vidy ary hamita ny asa. Avy eo, azonao atao ny mampiasa ny Hotspot findainao ary mampihetsika ny fifandraisana Internet. Ampifandraiso ny Internet amin'ny PC mankany amin'ny Hotspot findainao.
Tsy ny fomba mahomby indrindra satria miankina be amin'ny hafainganam-pandehan'ny findainao sy ny fahazoana miditra amin'ny tamba-jotra. Na izany aza, dia hack tsara indrindra ho anao ny fampiasana any am-pianarana tsy misy olana.
Raha toa ka lafo loatra na tsy mora idirana an-tsekoly ny fifandraisana amin'ny findainao any an-tsekoly, dia mety mila miantehitra amin'ny wifi an'ny sekoly ianao. Na izany aza, mety voasakana ny sekolinao Minecraft, ankoatry ny fidiran'ny tranonkala hafa. Ka inona no azonao atao?
2. Mampiasà VPN
Ity no safidy tsara indrindra raha tsy te hampiasa vola amin'ny fitaovana wifi ho an'ny solosainanao ianao. Raha tsy te hampiasa ny Hotspot findainao ianao dia ampiasao ny a VPN tsara. VPN mitombo laza. Taloha, tsy nisy nahalala ny fahaizany. Ankehitriny, malaza be izy io ka maro ny mpamatsy streaming no miasa amin'ny fanidiana hidina VPN VPN. Fa tsy mila miahiahy ianao.
Tsy manakana ny fidirana VPN ny Minecraft, ary hiambina ny fifandraisanao izany. Ny tena zava-dehibe kokoa, ny VPN no safidy mety indrindra raha te hijanona tsy fantatra anarana ianao rehefa mifandray amin'ny wifi ao an-tsekoly. Ny VPN no safidy mety raha milalao Minecraft amin'ny fitaovanao amin'ny tamba-jotra sekoly na PC an'ny sekoly ianao.
Ity ny zavatra rehetra tokony hataonao amin'ny famohana ny Minecraft any an-tsekoly amin'ny alàlan'ny VPN:
Sintomy VPN:Hamarino tsara fa misintona mpanome tolotra VPN premium. Mety tsy te hampiasa vola ianao satria mpianatra. Na izany aza, maro ny mpanome tolotra VPN no manome fidirana amin'ny fitaovana maro. Azonao atao ny mampiditra chip miaraka amin'ny namana sy mividy famandrihana VPN. Tsy fahendrena ny mampiasa VPN maimaim-poana satria tsy azo itokisana izy ireo, ary tsy manome fiarovana azo antoka izay tena ilaina amin'ny fifandraisana VPN
Manomboha VPN:Raha tsy te hisoratra anarana ianao, ny ankamaroan'ny mpanome tolotra VPN dia manolotra kinova fitsapana. Ny sasany dia voafetra amin'ny haben'ny bandwidth; ny hafa kosa manome azy araka ny andro. Noho izany, azonao atao ny mampiasa azy io hahazoana VPN. Rehefa mametraka azy ireo ianao dia afaka manomboka VPN amin'ny fifandraisana wifi anao. Hamarino tsara fa ny VPN dia manohana ny fifandraisana wifi.
Play Minecraft:Izay ihany no ilaina! Raha vantany vao mametraka sy manomboka VPN ianao dia hihetsika ao ambadika, ary afaka milalao Minecraft amin'ny wifi ao an-tsekoly ianao. Azonao atao ny manaraka an'io dingana io raha te hilalao amin'ny fomba mahomby ny fitaovana na ny PC an-tsekoly.
Milalaova Minecraft tsy misy wifi Hotspot na VPN:
Ianao ve mitady vahaolana hafa amin'ireo safidy voalaza etsy ambony? Tsy misy raha te-hilalao Minecraft tena izy ianao. Misaotra ny fitohizan'ny Xbox Minecraft, azonao atao ny milalao azy io miaraka amin'ireo namanao. Na izany aza, izany ihany no azonao atao.
Fa misy vaovao tsara! Misy ny Minecraft Education Edition.
Inona ny fanontana fanabeazana Minecraft?
Tao anatin'ny areti-mandringana dia namoaka kinova Minecraft i Microsoft izay nifantoka tamin'ny fanomezana traikefa lalina ho an'ny fanabeazana ho an'ny mpianatra. Raha institiota fanabeazana manana fahazoan-dàlana ianao dia afaka mahazo Minecraft Education Edition ary mizara izany amin'ireo mpianatra.
Mitondra anao fiainana mitovy amin'ny Minecraft miaraka amina sekoly io. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia afaka manatrika sekoly tena izy izao ny mpilalao amin'ny tontolon'ny Minecraft! Mahafinaritra tokoa izany? Eny tokoa, manampy ny antso ataon'ny Minecraft izay manintona izy satria io dia toy ny filalaovana lalao sy fanaovana zavatra maro.
Microsoft dia afaka manosika ny fanabeazana ho lasa sisintany vaovao amin'ny alàlan'ny Minecraft Education Edition.
Inona no ilainao amin'ny fanontana fanabeazana Minecraft?
Mila ho institiota fanabeazana ara-dalàna ianao hahazoana Minecraft Education Edition. Manaraka, raha manana efa misy ianao Office 365 famandrihana, hahazo fahazoan-dàlana maimaim-poana ianao (teny mahafinaritra ho an'ny famandrihana) ho an'ny Minecraft Education Edition.
Ny admin na tompon'ny Minecraft dia hametraka ny lalao ao amin'ny rafitr'izy ireo, ary amin'ny alàlan'ny lalao dia misy safidy manasa. Aleo mangataka amin'ny mpianatra hanao mailaka ‘fanabeazana’ na ‘matihanina’ ary manasa azy ireo amin'ny fandefasana ny rohy mankany amin'ireo mailaka ireo.
Ny olona manana fidirana amin'ireo mailaka ireo ihany no afaka misintona ny fanontana fanabeazana Minecraft ary miditra. Izany no ahafahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra manana rafitra fanabeazana mahasalama kokoa.
Raha azonao atao ny mandresy lahatra ny fitantanananao an-tsekoly ho an'ny Microsoft Education Edition, izany no fomba tsara indrindra hilalao azy io any an-tsekoly sy any an-trano mba hananana fiainana mianatra lalina. Azonao atao mihitsy aza ny mangataka ny solontenan'ny Microsoft mba hanangana azy any amin'ny sekolinao.
Raha tsy izany, ny fampiasana ny VPN no safidy tsara indrindra foana raha tsy te-hanelingelina ny Microsoft Education Edition ianao. Ary farany, ny hany azonao atao dia ny mampiasa ny finday Hotspot sy ny fitaovana wifi ho an'ny PC an-tsekoly hankafizany ny lalao nefa tsy misy fanelingelenana.
Manantena izahay fa ity torolàlana ity dia manampy anao hanazava ny zava-drehetra ary hianatra zava-baovao momba ny famohana ny Minecraft sy ny filalaovana azy any an-tsekoly.
Amboary ny lesoka Minecraft remoteconnect
Fantaro ny momba ny ady miafina Marvel Superheroes
Fanesoana: Daty Famoahana, Trailer, ary Izay Rehetra Fantatray Hatreto
tranokala hijerena andian-tserasera
mandra-pahoviana ny etona vao mamerina
avadiho ny video youtube ho mp3 amin'ny windows
tranonkala mivantana tsara indrindra maimaim-poana
kilalao tsy voasakana 66 ho an'ny sekoly
Generator kaody fitsapana mivantana xbox